Print | Email | Hits: 8000
Raammoon Geerii Ameerikaa jedhamu Godinaalee Oromiyaa 12 keessatti kan mul’ate ta’uu Biiroon Qonnaafi Qabeenya Oromiyaa beeksise. Raammoon kun oomisha Boqqolloo lafa hektaara kuma 200 olirratti misoomee jirurratti akka mul’ates Biirichi beeksiseera
Itti Aanaa oogganaafi Daarektarri Daarektoreetii Dhimmoota Kominikeeshiinii Mootummaa Biirichaa Obbo Hamzaa Mahaammad ibsa Gaazexessitootaaf kennaniin raammoon Geerii Ameerikaa jedhamu dhiheenya kana Godinaalee Oromiyaa 12, Aanaalee 85 fi gandoolee 779 keessatti mul’ateera jedhaniiru.
Oomisha Baqqolloo lafa hektaara kuma 204tti siqurratti kan mul’ate yoo ta’u, hojii ittisuu hanga ammaatti qonnaan bultoonniifi ogeessonni qonnaa godhaniin oomishini lafa hektaara kuma 12 fi 500 irratti misoomee jiru to’atameera. Kana keessaa lafa hektaara 6327 irraa keemikaalaan, hektaara 5300 irraa ammoo mala aadaatiin akka to’atame Obbo Hamzaan ibsaniiru.
Weerara kana to’achuuf qonnaan bultoonni muuxannoo bara darbe fayyadamuun raammicha to’atan mala aadaa gargaaramuun ofirraa ittisuu qabu edhaniiru. Raammoon kun midhaan gosa hundaa kan miidhu waan ta’eef qonnaan bultoonniifi ogeessonni to’annaafi hordoffii wlirraa hin cinne gochuun ittisuu akka qabanis himaniiru.
Bara darbe raammoon kun oomisha lafa hektaara kuma 300 olirratti margee jiru kan weerare yoo ta’u, qonnaan bultoonni mala aadaa gargaaramuun oomisha harka 56 baraaruu danda’aniiru. Kan hafe ammoo keemikaala fayyadamuun to’achuun akka danda’ame Obbo Hamzaan himanii, baranas muuxannoo sana fayyadaumuun to’achuu akka qaban dhaamaniiru.
Weerara raammoo Geerii kana to’achuuf koreen hordoffiifi deggersaa olii hanga gadiitti hundaa’uus ibsaniiru.